Josef na Fero; Ihe Timoti Ketara n’Aka Nne Ya na Nne Nne Ya | Ị̀ Maara?
Otú Chineke Si Lee Ịlụ Agha Anya n’Oge Ochie
Otú Chineke Si Lee Ịlụ Agha Anya n’Oge Ndịozi Jizọs
Otú Chineke Si Ele Ịlụ Agha Anya n’Oge Anyị A
Echekwa M na M Na-ekpori Ndụ
Gịnị mere Josef ji kpụọ isi ya na ajị agba ya tupu ya agaa hụ Fero?
Ebe e sere onye Ijipt na-akpụ mmadụ isi n’oge ochie
N’akwụkwọ Jenesis, Baịbụl kwuru na Fero nyere iwu ka e si n’ụlọ mkpọrọ kpọpụta Josef, bụ́ onye Hibru, ka ọ bịa kọwaara ya nrọ ọ rọrọ na-enye ya nsogbu n’obi. Josef anọọla ọtụtụ afọ n’ụlọ mkpọrọ tupu Fero ekwuo ka a kpọta ya. Ma, n’agbanyeghị na Fero chọrọ ka Josef bịa ngwa ngwa, Josef bu ụzọ gaa kpụọ isi ya na ajị agba ya. (Jenesis 39:20-23; 41:1, 14) Ihe a e dere n’akwụkwọ Jenesis nwere ike iyi ihe na-adịghị mkpa, ma, o gosiri na onye dere ya maara omenala ndị Ijipt nke ọma.
E ji iruwe afụ ọnụ mara ndị Hibru na ọtụtụ mba ndị ọzọ dị́ n’oge ochie. Ma, otu akwụkwọ nke kwuru gbasara ihe ndị mere n’oge ochie kwuru na ná mba ndị dị́ n’ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa n’oge ochie, ọ bụ naanị ndị Ijipt bụ ndị na-anaghị eruwe afụ ọnụ ha.
Ọ̀ bụ naanị afụ ọnụ ka ndị Ijipt na-akpụ? Otu akwụkwọ a na-akpọ Biblical Archaeology Review kwuru ihe gosiri na ndị Ijipt na-achọ ka onye chọrọ ịga hụ Fero jikere ka onye na-aga n’ụlọ nsọ. Ya bụrụ otú ahụ, ọ pụtara na Josef ga-akpụcharịrị ntutu isi na ajị niile dị ya n’ahụ́ tupu ya agaa hụ Fero.
Akwụkwọ Ọrụ Ndịozi kwuru na nna Timoti bụ onye Grik. Ọ̀ pụtara na Timoti bụ onye Gris?
Ọ bụchaghị ihe ọ pụtara. N’Akwụkwọ Nsọ, Pọl chọọ ikwu gbasara ndị na-abụghị ndị Juu mgbe ụfọdụ, ya akpọọ ha ndị Grik. (Ndị Rom 1:16; 10:12) Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na ndị bí n’ebe dị iche iche Pọl kwusara ozi ọma na-asụ asụsụ Grik, ­na-emekwa omenala ndị Grik.
Ma ònye ka ndị oge ochie na-akpọ onye Grik? N’ihe dị ka puku afọ abụọ na narị afọ atọ gara aga, otu ọkà okwu ndị Atens, aha ya bụ Isokratis, kwuru na omenala ndị Grik na-agbasa ebe niile n’ụwa. O kwuru na o meziri ka “ọ ghara ịbụ naanị ụmụ amaala Gris ka a na-akpọ ndị Grik, kamakwa, ndị niile a kụziiri asụsụ na omenala ndị Gris.” N’ihi ya, ọ ga-abụ na ihe mere Pọl ji kpọọ nna Timoti na-abụghị onye Juu onye Grik bụ n’ihi na ọ na-eme omenala ndị Grik, ọ bụghị n’ihi na ọ bụ nwa amaala Gris. Ọ ga-abụkwa ya mere o ji kpọọ ndị ọzọ na-abụghị ndị Juu ndị Grik.—Ọrụ Ndịozi 16:1.
Ihe mere n’ezinụlọ a mụrụ Josef na-akụziri di na nwunye nwere ụmụ ọ na-abụghị ha abụọ mụrụ ihe.
Gịnị nyeere Timoti aka ịkwụsị ime ihere ma ghọọ onye nlekọta e ji ama atụ n’ọgbakọ Ndị Kraịst?
Ị̀ Maara?—Nọvemba 2015